Lozam-piarakodia tamin’iny RN2 iny
Naratra mafy ilay mpamily fiara lehibe mpitondra entana
Fiara lehibe mpitondra entana iray no nivadika tamin’iny lalam-pirenena faharoa iny, 17 km miala ny tampon-tananan′ ny Toamasina.
Araka ny fantatra dia saika hiazo ny andrenivohitra tamin’ny Asabotsy faha 30 ny volana mai lasa teo ity fiara ity ka izao tratran’ny lozam-pifamoivoizana izao.
Vokany naratra mafy ny mpamily ilay fiara araka nambaran’i Fidison, mpamily mpanampy an’ilay fiara. Fantatra tamin’io koa fa nony hamafin’ny hafainganampandeha ihany no nampivadika ilay fiara. Zotra indroa isankerin’andro moa no ataon’izy ireo ary ny tompon’ilay fiara no mpamily, tsy nahatandrina ny fahainganampandeha, izao niharambohina naratra mafy izao.
(48) Prud′homme RAKOTOSON : 03-06-2014 - 17:00